China Rhinestone lapel pini fekitori uye vagadziri | Kingtai
Tarisa pane ino dhizaini yakanaka uye yedu yakasarudzika twist, inomiririra moyo wekuziva mwedzi.Iyi tsvuku tsvuku tsvuku bhuruu inonakidza, yakashongedzwa uye inonakidza! , ine nickel-yakafukidzwa kupfeka bhurocha.Iine chengetedzo yekukiya pini yekumira kwakaringana pane chero chidimbu chemidziyo, tambo kana ngowani.Each iri rakasarudzika polythene bhegi.Rega ichi chipo chive munhu akasarudzika anorwara nechirwere chemwoyo kana kusimudzira kuziva.
Nyeredzi lapel Pin yakaburitsa mamirioni emapeni pini uye yakagamuchirwa zvakanaka nevatengi vasingaverengeke, ichiita rako dombo / Rhinestone lapel pini ive yakakwana seyekushongedza!
Isu tinorerutsa maitiro ekugadzirisa mapeni mapepa kuitira kuti vatengi vagone kugadzirisa mapeni emipendero. Nhanho yekutanga ndeyekuti utitane nesu kuti utange kugadzira ako Rhinestone lapel pini!
Nei paine pini yehinestone? Nekuti hapana chakafanana nematombo emabwe kuti uwane pini yako yechinyakare kana bhurocha rakagadzirirwa kukupa iwe wakanaka uye unoshamisa kutaridzika kwaunoda.
Isu tinopa anopfuura gumi nemaviri mavara ematombo akasiyana muhukuru hwakasiyana, pamwe nezvakawanda zvishongedzo uye sarudzo dzekubatsira zvirinani iwe kugadzirisa yako Rhinestone tsono kusangana nezvinodiwa zvako chaizvo.
PinMart yakave nerombo rakanaka kushanda nemamwe emhando huru mumafashoni, makirabhu evanofarira uye vatengi vemakambani kuti vagadzire anoshamisa eRhinestone pini nemabhureki.
Izvi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinodhura, zvisingawanikwe kumwe kunhu.
Ko pini dzakagadzirwa-dzakagadzirwa nemaphiniki dzinokodzera dhizaini yangu?
Tinogona kugadzirisa zvipineti zvemhando yepamusoro-soro mumhando dzakasiyana, asi hunhu hwezvinhu zvinoreva kuti dhizaini yakaomarara inogona kunge isiri sarudzo yakanakisa yemapini akadaro.
Kune akawanda akasiyana kristal mavara uye saizi kusarudza kubva, zvisinei, isu tinokwanisa kugadzira zvinoshamisa mapini uye mabrochure ane anotaridzika kutarisa iwe aungasatarisira.
Maitiro ekugadzira tsika dzechipineti mapini zvinoreva kuti avhareji yekugadzira nguva mushure mekubvumidzwa kwesampuli mavhiki mashanu kusvika masere. Nekuda kwekunetseka kwemaitiro ekugadzira aya, isu tinoda hushoma hwehuwandu hwezvidimbu mazana mashanu.Kana iwe uchida isu kuti tiite yakadzama kupa, mumwe wevamiriri vedu vevatengi anozokubata iwe mukati mezuva rekushanda. Kurukurai mazano enyu neyedu mutsika PIN nyanzvi!
Pashure: mufananidzo wakaiswa pinis
Zvadaro: 3D Lapel mbambo